Sarufa Nhema, 2-Amino-4-Nitrophenol, Sarufa Nhema BR - Foring
Chirimwa chedu chine nzira yepamusoro yekugadzira Sarufa Nhema B, Sarufa Nhema BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene uye 2-Amino-4-nitrophenol
Yakajeka-nhema nhema kana zviyo zvine simba rakasiyana. Inonyanya kushandiswa kudhaya padonje, viscose, vinylon uye bepa.
Mumvuri wakasiyana neSurfure Nhema BR.
Pale yero kune yakajeka brown kristaro. Zvekugadzira madhayi, mishonga yekuuraya zvipuka uye mushonga wepakati.
Yero kristaro, upfu. Zvekugadzira madhayi nemishonga yepakati. Inonyanya kushandiswa muasidhi brown RH, acid yakasvibirira 3G, nhema BL, BRL, BGL.
Foring Import & Export Co, Ltd. yakavambwa muna 2004. Kambani yedu yawana iyo ISO 9001: 2006 uye ISO 14000. Isu takaunganidza ruzivo rwakapfuma rwekunze zvigadzirwa zveChinese zvakanaka zvemakemikari. Zvichienderana nechirimwa chedu chine simba, isu tinokwanisa kutsigira Sulfur Nhema nevapindiri vayo kumusika wekunze.
Iko kunaka kwekutsanya zvivakwa, kudhura mashandiro & kunyevenuka kwekushandisa pasi peakasiyana mamiriro ekugadzirisa mamiriro, kupera-kuenderera uye kuenderera kunoita kuti ive imwe yeanonyanyo kufarirwa dyestuffs.
Inonyanya kushandiswa kudhaya padonje, viscose, vinylon uye bepa.